सर्वोच्चको आदेशपछि पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न यस्ता छन् अप्ठेरा, ३० दिन पछि के हुन्छ राजनीति ? – Dailny NpNews
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न यस्ता छन् अप्ठेरा, ३० दिन पछि के हुन्छ राजनीति ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २८, २०७८ समय: १९:५५:०९
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले संसद भंग गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश समेत दियो । सर्वोच्चले दोस्रो पटक संसद पुनस्थापनाको फैसला सुनाएको हो । सोमवार आएको फैसलामा देउवालाई दुई दिन भित्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपनि देउवाका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने वाटो भने सजिलो छैन । सर्वोच्चको यो आदेशसंगै अर्को एक राजनीतिक संशय पनि शुरु भएको छ । दुई दिन भित्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपनि प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन उनले पनि प्रतिनिधिसभाबाट एक महिनाभित्र बिश्वासको मत लिनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिक घटना जता मोडिन पनि सक्छ । देउवाले बिश्वासको मत प्राप्त गरे मात्र प्रतिनिधिशभाले पुरै कार्यकाल रहने छ । यदि देउवाले बिश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने प्रतिनिधिशभा पुनः बिघटनको बाटोमै जाने निश्चित जस्तै छ ।
अघिवक्ताहरुका अनुसार देउवाले बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभा बिघटन भई मुलुक निर्वाचनमा जान्छ । यदि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने अबको राजनीति कसरी अघि बढ्छ या ३० दिनपछि के हुन्छ भन्ने नै अहिलेको चासोको विषय हो ।